Fans of the imibala ekhaya ngokuvamile uthola isipho hydrangea, okuyinto akumangazi. Beautiful flower ne inflorescences eyindilinga futhi amaqabunga amakhulu bakhangwa lapho uwubona okokuqala. Kodwa hydrangea ekhaya, kanye nezinye houseplants eziningi, zidinga ukunakekelwa okukhethekile. Izinkinga okhulayo lokhu isitshalo emangalisayo ngokudingayo siyobese sizame ukuqonda.
Lapho kwazalelwa hydrangeas neyaziwayo waseMpumalanga naseNingizimu Asia (China, Japan). Sekukonke, kukhona abangaba ngu-70 izinhlobo hydrangeas futhi ezihlukahlukene kumnandi of imibala (pink, blue, white, nokunye. D.). Izinguqulo ukubukeka amagama izitshalo ezimbalwa, kodwa romantic kakhulu saziwa eyodwa kuphela. Yekuchumana ngeke ukuqaqa, nje ukucacisa ukuthi gama ngqo exhumene ne-Sisters igama WaseRoma iSikhulu Nassau-Siegen, uKarl Heinrich. Hydrangea ekhaya eqala ukukhuluphala kamuva kakhulu.
Ngokuhamba kwesikhathi, lesi sitshalo uye uvezwe systematization futhi waziwa ngokuthi Hydrangea, okuyinto elihunyushwe esuka izindlela ngesiGreki 'uyisitsha yamanzi. " Abanye baphikisa ngokuthi igama lihlotshaniswa izitshalo amanzi-onothando ezingavamile. Abanye bayaqiniseka ukuthi lokhu ukuma pods imbewu abafana ukubukeka kwabo imbiza.
Kuba sobala ukuthi isamba elanele umswakama - imfuneko esemqoka, okuletha kumniniyo hydrangea. Uyabakhathalela ekhaya, ngokuvamile, akunzima, okumqoka kakhulu ukutholakala isikhala sokukhula. Ngempela, ubukhulu imbali uyakwazi ukufinyelela semali ehlathini.
Ezinye izindaba zika-isitshalo sintula lokushisa 20 C, ngakho ebusika ke wakwazi ukuthola amandla ngokwanele ukuba izimbali olwengeziwe. Futhi imbali hydrangea, anakekele ekhaya okuyiwona akunzima kakhulu, akukuhle ukubeka ezindaweni ukubopha. Ayithandi emthunzini njalo, ngakho pobespokoytes eliningi eyanele yokukhanya. Ebusika, lesi sitshalo kudinga ukuchelela kanye ngemva kwezinsuku 4-5.
Ngaphambi kokuphuza inhlabathi kunconywa proryhlit njengoba amandla emoyeni kubaluleke kakhulu izimpande izitshalo ezifana, ezifana hydrangea ekhaya. Ukunakekela akugcini lokhu futhi ngesikhathi izimbali kudinga ngenkasa ezinkulu, ngaleyo ndlela kuphela ukuvikela amanzi okufanele sisetshenziswe.
Ukutshala Kwenziwa emhlabathini, esakhiwa Peat, isihlabathi futhi Izingxube wezinhlobo ezihlukahlukene zenhlabathi, okuyinto ukudlula lula kokubili umoya namanzi. Lapho zitshala kufanele uqaphe zonke izinhlobo kusaladi. Ngokuvamile ngokwanele nje ukubeka imbali e substrate futhi umvumele ukuba "nisukume." Ukuze bagcine ngempela ngenyanga, uma isitshalo akezi ukuphila - zalisa. Entwasahlobo, imbali idinga ukusekelwa esebenzisa umquba phosphate.
Ungakhohlwa mayelana usongo izitshalo enempilo kusuka zonke izinhlobo izinambuzane "ethandwa", ikakhulukazi aphid imbali. Ayikho ngaphansi kuka eminye imibala yalo bangase bahlupheke futhi hydrangea. Uyabakhathalela ekhaya eziphathelene kuvikeleke impilo imbali, kudinga kancane kakhulu. Engingakusho nje bagcine imbali futhi ayakhala isikhathi, ngakho akazange ayeke ukukunika injabulo.
Hydrangea ekhaya, uyabanakekela iyiphi Awukwazi ukushayela kube nzima kakhulu, ungakwazi ukushintsha umbala izimbali zabo izikhathi eziningana. Abanikazi of inflorescences bluish ukukhiqiza izimbali umbala deep blue ukuze ungeze ngokwanele ngesikhathi ayakhala nosawoti yensimbi. Inhlanganisela ezinhlotsheni ezithile zikasawoti nemiphumela engalindelekile, waliguqula imbali eziyizintandokazi zakho ngezinsuku ezimbalwa.
Ukuthola imbali enhle njalo ukwazi kwenze umoya wakho uthokoze, ikakhulukazi uma kuziwa izitshalo ezifana hydrangea. Uyabakhathalela ekhaya ngoba isipho esinjalo zingancishiswa amaphuzu ayinhloko amathathu nje:
ukuthambisa esifike ngesikhathi;
ukungabi bikho kokukhanya kwelanga ngqo;
izimo ukuhambisana ukufakelwa.
Khona-ke izimbali zalesi sihlahla kuthokozise iminyaka eminingi, abaningi nawe.
Opera kanye Ballet Theatre e Kiev: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
BMW F650GS: Ukucaciswa, imiyalelo yokusebenzisa kanye nokubuyekeza
Indlela ukupheka hawthorn? Stocking up for ubusika
"INingizimu Area". Residential eziyinkimbinkimbi "South Area" - Izibuyekezo